Farmaajo oo Arbcada booqanaya Ethiopia | Kobciye24.com
Farmaajo oo Arbcada booqanaya Ethiopia
Apr 30, 2017 - jawaab
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullahi Maxamed ayaa booqanaya maalinta arbcada ah ee soo socota kadib markii uu casumaad uu ka helay Ra’iisul wasaraha dalkaasi Hayla Maryam Desalin,waana booqashadisi ugu horeeysay uu ku tagayo dalkaasi.
Diplomaasi Ethiopian ah oo la hadlay wakaalada Anadol ee wararka u faafisa Turkiga ayaa sheegay in Farmaajo uu la kulmi doono dhigiisi Ethiopia Malatu Shumi iyo Desalin booqashadaasi oo qaadan doonta laba maalmood.
Diplomaasigaasi oo diiday magacisa in warbahinta loo adeegsado ayaa sheegay in wada hadalada madaxweynaha Soomaaliya iyo Ra’iisul wasaraha Ethiopia diirada lagu saari doono qadiyaha dhinaca amaanka xiriirka labada dal iyo arimaha bini aadanimo.
Dhinaca kale Diplomaasi African ah ayaa sheegay in Madaxweyne Farmaajo uu kula kulmi doono Ethiopia gudoomiyaha Midowga Africa Musa Faki.
Wakaalada Anadol oo Mas’ulkaasi soo xiganaysa ayaa sheegay in kulanka Farmaajo iyo Faki ay uga wada hadli doonan amanka xasiloonida la dagaalanka Al-shabaab,ma uusan faah faahin qorshayaal amni uu soo hadal qaaday in labada mas’uul ay isla meel dhigi doonaan.
Ma jiro Mas’uul u hadlay Madaxtooyada Soomaaliya oo xaqiijinaya booqashada arbacada uu ku tagayo magaalada Adis ee dalka Ethiopia sida ay wakaalada warkeedi kuso gaba gabeeysay.